100% Polyester Filament High Tenacity Sewing Threads Mutengesi
Spec:Zvakajairwa kutaurwa zvine 210D / 2, 210D / 3, 300D / 3, 420D / 3, 630D / 3 zvichingodaro.
Color:Makadhi emavara aripo uye akagadziridzwa ruvara anogamuchirwa zvakare.
Product Feature: Polyester yakakwirira kutsungirira Kusona tsvimbo, inozivikanwawo seTedron thread, ishinda yekusonesa yakagadzirwa nepamusoro-simba, yakaderera-shrinkage polyester filaments nekubatanidza, kumonya uye mamwe marapirwo. Iine simba repamusoro, kukurumidza kweruvara rwepamusoro, kupfeka kwakanaka kuramba, kuita kwakanakisa, senge corrosion uye mildew, isina majoini, nezvimwe.
Muchigadzirwa chekugadzira kana uchipindura kune tension shanduko, yakanyatsogadzikana, nokudaro kuderedza tambo yekutsemuka uye kutsiva shinda panguva yekusona. Izvi zvinoreva kuti zvinobatsira mukuvandudza chibereko uye chakanyatsokodzera kusona shangu, zvipfeko zvehunyanzvi, zvishandiso zvehunyanzvi, fenicha yematehwe, zvishongedzo zvematehwe.
Nei uchisarudza MH Polyester yakakwirira tenacity kushona tambo?
Simba rayo repamusoro rekutyora simba uye rakanakisa kutambanudza hunhu hunogadzira inoyevedza, yakanaka mameseji pane shangu dzeganda uye zvigadzirwa zveganda.
Iyo yakapfava yekupedzisa ine yakaderera friction inoderedza mhedzisiro yekupisa kwetsono uye abrasion. Iine stitch formation uye yakashambidzika seam.
Tex Mathikiti Kukura Denier PLY Avhareji Simba Elongation Min-Max Yakakurudzirwa Needle Size kunyoresa
(T) (TKT) (D) --- (Kg) (%) muimbi Metric ---
35 80 100D 3 ≥2.0 15-21 9-11 65-75 Chiedza Chiremu
35 80 150D 2 ≥2.0 15-21 9-11 65-75 Chiedza Chiremu
50 60 150D 3 ≥3.0 16-22 10-12 70-80 Kurema kwepakati
50 60 210D 2 ≥2.8 16-22 10-12 70-80 Kurema kwepakati
70 40 210D 3 ≥4.2 17-23 13-16 85-100 Kurema kwepakati
80 30 250D 3 ≥5.0 18-23 16-19 100-120 Kurema Kurema
135 20 420D 3 ≥8.4 18-24 18-21 110-130 Kuwedzera Kurema Kurema